MINIEYE Bags D3 Round Financing, D Round Financing စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၂၀ ကျော် - Pandaily
MINIEYE Bags D3 Round Financing, D Round Financing စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၂၀ ကျော်
Jun 06, 2022, 19:30ညနေ 2022/06/06 23:13:23 Pandaily
စမတ် မောင်းနှင်မှု ဖြေရှင်းချက် developer MINIEYE က တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်D3 ငွေကြေး ပြီးစီး ခဲ့သည်Cathay Capital မှ ဦး ဆောင်။ NIO Capital နှင့် Shen Wanhongyuan ၏ ရန်ပုံငွေ ခွဲ တစ်ခု နောက် သို့လိုက် ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ Minieye ၏စုစုပေါင်း D ရန်ပုံငွေ သည် ယွမ်သန်း ၈၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀. ၄ သန်း) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
MINIEYE က D Wheel ၏ ရန်ပုံငွေ တစ်ခုလုံးကို ပြည်တွင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု အသိဉာဏ် မောင်းနှင်မှု နယ်ပယ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဦး ဆောင်မှု ကိုပိုမို ခိုင်မာ စေရန်၊ အဓိက နည်းပညာ stack ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးချဲ့ ရန်နှင့် အဆင့်မြင့် autopilot ဖြေရှင်းချက် များ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့် ရန်အသုံးပြု လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
MINIEYE သည် ဆန်းသစ်တီထွင် မှုနှင့် ကိုယ်ပိုင် မောင်းနှင် သည့် full-stack နည်းပညာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အာရုံစိုက် ပြီး အကြီးစား အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု၏ ရှေ့တန်း မှ နည်းပညာများကို ကျူးလွန် သည်။
ကွဲပြားခြားနားသော စျေးကွက် အစိတ်အပိုင်း များနှင့် autopilot ၏ မတူကွဲပြားသော လိုအပ်ချက်များကို တုံ့ပြန်, MINIEYE ထိုကဲ့သို့သော L0-L2 အဆင့် ADAS ထုတ်ကုန် များနှင့် ဖြေရှင်းချက် iSafety, L2 +/L2 + + အသိဉာဏ် မောင်းနှင်မှု အကူအညီ ဖြေရှင်းချက် iPilot, စမတ် cockpit အမြင် နှင့် အပြန်အလှန် ဖြေရှင်းချက် iCabin အဖြစ် အဓိက ထုတ်ကုန် လေးခု ဖွဲ့စည်း ခဲ့ နှင့် High-Precision မြေပုံ လူစုလူဝေး update ကို ဝန်ဆောင်မှု IMAP…
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:အသိဉာဏ်ရှိသော မောင်းနှင်မှု ကုမ္ပဏီ MINIEYE သည် D2 ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးဆုံး သည်
MINIEYE သည် မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်သူ ၄၀ ကျော်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တရုတ် NEV ထုတ်လုပ်သူ NIO နှင့် Hozon Auto အပြင် Geely နှင့် BYD ကဲ့သို့သော ရိုးရာ ဦး ဆောင် ကား ကုမ္ပဏီ များပါဝင်သည်။ စုစုပေါင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု စီမံကိန်း ပေါင်း တစ်ရာ နီးပါး စာချုပ်ချုပ်ဆို ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင်၎င်း၏ စမတ် မောင်းနှင်မှု ထုတ်ကုန် များသည် ယူနစ် ၄၀၀ ၀၀၀ ကျော် တင်ပို့ ခဲ့သည်။
Cathay Pacific Capital Partner John Li က “Minieye ဟာ စီးပွားဖြစ် မော်တော်ယာဉ် အကူအညီ နဲ့ မောင်းနှင် တဲ့ ဈေးကွက် ဝေစု ထဲမှာ ထိပ်ဆုံး မှာရှိ နေတယ်။ ဒါ့အပြင် ခရီးသည်တင် ကား တွေနဲ့ စွမ်းအင် သုံး မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီ အသစ် တွေရဲ့ ဈေးကွက် ထဲကို ၀ င် လာပြီး စီမံကိန်း Sentinel ဝယ်ယူ မှုများစွာ ရရှိ ခဲ့တယ်။ မဟာဗျူဟာ အရင်းအမြစ် များနှင့် ရန်ပုံငွေ များ၏ ပံ့ပိုး မှုဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်များအား လုံခြုံစိတ်ချရသော ထုတ်ကုန်များ ကိုဆက်လက် ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ပြီး မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်း အတွက် ရေရှည် တန်ဖိုး ကိုဖန်တီး နိုင်သည်ဟု ယုံကြည် ရသည်။ “
Tags automotive industry | Autonomous Driving | financing | MINIEYE
မော်တော်ယာဉ် အလိုအလျောက် မောင်းနှင်မှု နည်းပညာ တီထွင် သူ Smarter Eye Bag သည်ဒေါ်လာ ၄၇ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်
Self-pilot product research and technical company Smarter Eye ကုမၸဏီဟာ Round B ရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္း ယြမ္ သန္း ၃၀၀ နီးပါး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇ ဒသမ ၀၇ သန္း) ကို ၿပီးစီး ၿပီလို႔ စေနေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
Startups Jan 10 ဇန်နဝါရီ 10, 2022
Autopilot ကုမ္ပဏီ TrunkTech သည် Round B ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုကို ပြီးစီး ခဲ့သည်
Self-pilot နည်းပညာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူ TrunkTech သည် ယခင်က BAIC Capital ၊ Zhengzhou Holdings နှင့် Top Sign Capital တို့ ဦး ဆောင်သော ရန်ပုံငွေ အသစ် ကိုရရှိခဲ့သည်။
Startups Feb 16 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2022
အသိဉာဏ်ရှိသော မောင်းနှင်မှု ကုမ္ပဏီ MINIEYE သည် D2 ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးဆုံး သည်
စမတ် ကား နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ MINIEYE က ဒေါ်လာသန်း ရာနှင့်ချီ သော D2 ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ပြီဟု တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
Startups Feb 23 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 23, 2022
Automatic Driving Truck Technologies Plusက ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂၂၀ တိုး
China Truck Automatic Carrier Plus (Original Plus. Wai) ကုမၸဏီက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ FountainVest Partners ႏွင့္ ClearVue Partners တို႔တြင္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ေငြ သန္း ၂၂၀ ကို မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Industry Apr 01 ဧပြီ 1, 2021